आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१९ वैशाख २०७८ आइतबार २ मे २०२१) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१९ वैशाख २०७८ आइतबार २ मे २०२१)
१९ बैशाख २०७८, आईतवार ००:१९
श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ वसन्त ऋतु वि.सं.२०७८ वैशाख १९ गते आइतबार तद्अनुसार सन् २०२१ मे २ तारिख वैशाख कृष्णपक्ष षष्ठी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र १४ः३३ पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सिद्धि योग ४ः२२ पर साध्य योग गरकरण आनन्दादिमा शुभ योग चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमणशील रहला । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः२६ मा भयो र सूर्यास्त साँझ १८ः३७ मा हुनेछ ।
मेष – समय शुभ र भाग्यवर्द्धक छ । यात्रामा सफलता हासिल हुनेछ । धर्मकर्ममा प्रवृत्त रहनुहुनेछ । रोकिएको काम बन्नुका साथै विविध कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ । आँट साहस उत्साह थपिने छ । बौद्धिक र सृजनात्मक काम होला । रोकिएको काममा सफलता हासिल हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य बढ्ला । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभावमा वृद्धि होला । आफूतिर अरुलाई तान्ने क्षमता बढ्नेछ । सुख–सुविधासित सम्बन्धित काम बन्नुको साथै वार्तामा पनि सफलता मिल्नेछ । घरको सुखशान्ति बढ्नेछ । व्यवसायिक क्षेत्रमा नयाँ सफलता प्राप्त होला । रसरागप्रति आकर्षण बढ्नेछ ।
बृष – संघर्षले सफलता प्राप्त गराउँछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्नुका साथै सुख शान्ति समृद्धि पनि प्राप्त हुनेछ । मित्रजनका साथै सन्ततिसुख बढ्नेछ । आयस्रोत पनि बढ्नेछ । ऋण रोग र शत्रुसित लापर्वाही गर्नु उचित नहोला । मिहिनेतले सफलता प्राप्त होला । सुख समृद्धि आरोग्यता बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । मान सम्मान बढ्ला । सौर्य बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्ला । जोखिममा नपर्नुहोला ।
मिथुन – खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक काम बन्ला । हांसविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । जोखिम लिने समय होइन । मिष्ठान्न भोजन प्राप्त होला । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुनेछैन । योजना र बजेट बनाइ काम गर्नु होेला ।
कर्कट – ऋण रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । सफलता मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । आशा उत्साह बढ्नेछ । रोकिएको धन उठ्नेछ । सुख शान्ति बढ्नेछ । पारिवारिक स्थिति पनि अनुकूल रहनेछ । यात्रा होला ।
सिंह – प्रेमपथमा प्रगति हुनेछ । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनुको साथै सन्तान सुख पाइनेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । सुख समृद्धि मिल्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । साहसिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आशा उत्साहमा बढोत्तरी हुनेछ । नयाँ सफलता मिल्नेछ । यशवर्चश्व बढ्ला । रोकिएको काम बन्नेछ । धनसम्पति बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । मान महत्व वृद्धि हुनेछ ।
कन्या – दौडधुप जारी रहनेछ । अरुको भर पर्नु उचित नहोला । विवादमा नपर्नु हितकर हुनेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । धन सम्पत्ति बढ्ला । शुभ र भाग्यबर्द्धक काममा प्रवृत्त रहनु हितकर हुनेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । यात्रा हुनेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । सुख शान्ति बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । प्रेमपात्रको माया ममता कमै मिल्नेछ । मित्रजनसँगको ब्यवहारमा ध्यान दिनुहोला ।
तुला – आशा उत्साह बढ्नेछ । यात्रामा सफलता प्राप्त हुनेछ । आफन्तको साथ प्राप्त हुनेछ । भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । भागदौड चलिरहला । शारीरिक र आर्थिक काममा प्रगति होला । प्रेममा सफलता प्राप्त होला । सन्ततिसुख बढ्नेछ । शैक्षिक, बौद्धिक, कलात्मक, गीतसंगीत आदि कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ ।
वृश्चिक – मान महत्व बढ्नेछ । आफन्तको साथ मिल्नेछ । विवादप्रति सचेत भइ अरुको भरमा नपरेर काम गर्नहोला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्नेछ । गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । यात्रापरक काम बन्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । आशा उत्साह बढ्ला । दूरदेशबाट शुभ समाचार सुन्नुहुनेछ ।
धनु – मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । आरोग्यता बढ्ला । शत्रुलाई जित्ने क्षमता बढ्नेछ । आर्थिक उनन्ति हुनेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पदवी भेट्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । सुख सम्पति बढ्नेछ ।
मकर – यात्रमा सफलता मिल्नेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक काममा सफलता मिल्नेछ । शुभ काम बन्नेछ । उन्नति हुनेछ । महत्व बढ्ला ।
कुम्भ – समस्याको समाधान मिल्नेछ । यात्रा होला । खेलकुद भ्रमणमा रुचि बढ्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्ला । सुख शान्ति समृद्धि बढ्नेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ ।
मीन – स्वास्थ्यप्रति सजग रहनुपर्ने छ । खर्च बढ्नेछ । यात्रापरक काममा सफलता मिल्नेछ । ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने क्षमता बनिरहला । मिठो भोजन मिल्नेछ । मनोकुलको काम बनेर मन प्रशन्न रहनेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । सुखको बस्तुमा खर्च बढ्ला । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । जीवनसाथीको साथ मिल्नेछ ।
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२५ वैशाख २०७८ शनिबार ८ मे २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ वसन्त ऋतु वि.सं. २०७८ बैशाख २५
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२४ वैशाख २०७८ शुक्रबार ७ मे २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ वसन्त ऋतु वि.सं. २०७८ वैशाख २४
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२३ वैशाख २०७८ बिहीबार ६ मे २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ राक्षस नामक संवत्सर वसन्त ऋतु वि.सं.
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (२२ वैशाख २०७८ बुधबार ५ मे २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ वसन्त ऋतु वि.सं. २०७८ वैशाख २२